Rag Soomaali ah oo lasoo taagay maxkamad ku taala magaalada London – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaRag Soomaali ah oo lasoo taagay maxkamad ku taala magaalada London
Hiiraan Xog, Labo nin ayaa loo maxkamadeeyay falal argagixisanimo oo loo heysto, taasoo qeyb ka ah baaritaanno hadda ka socda magaalada London ee waddanka Britain.
Axmed Aweys, oo 32 jir ah, daganna xaafadda Redbridge ee bariga London iyo Cabdicasiis Cumar Muunye, oo ah 26 jir daggan Waqooyiga London ayaa goor dambe kasoo hor muuqan doona garsoorka maxkamadda Westminster.
Mr Aweys ayaa lagu soo oogay dacwad ku saabsan fidinta howlo argagixisanimo oo shacabka lagu faafiyo halka Mr Munye isagana maxkamadeyntiisa ay waafaqsantahay qodobka 2-aad ee xeerka la dagaallanka argagixisada.
Maxkamadeynta raggaan ayaa timid ka dib markii afar ruux lagu soo qabtay howlgallo baaritaanno ah oo ay booliska sameeyeen.
Haweeney 30 sano jir ah oo talaadadii loo xiray shaki la xiriira argagixisanimo ayaa wali ku jirta gacanta ciidanka booliska.
Nin kale oo 29 jir ah oo degan bariga London, oo isagana xabsiga loo taxaabay 18-kii bishii April ayaa ilaa iyo hadda u xiran booliska oo baaritaanno ku haya.
Madaxweynaha dalka Mareykanka oo raba in uu ciidan u sameeyo meel ka baxsan meeraha dhulka